ရေ အထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > ရေ အထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator
AOX-L ကိုစီးရီးရေအထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 2. Terminal နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
AOX-L ကိုစီးရီးရေအထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. Cam နှင့်ကန့်သတ် switch ကို
AOX စျေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသော inquiey မှ industry.According အရည်ကိုထိန်းချုပ်၏လယ်ပြင်တွင်စုဆောင်းခြင်း၏ 23 နှစ်ရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ linear လျှပ်စစ် actuator တစ်စီးရီးဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုအဆို့ရှင်အရည်ကိုထိန်းချုပ်၏လယ်ပြင်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တည်ငြိမ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လူအားလုံးတို့သည် AOX-L ကိုစီးရီးရေအထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator ON-OFF, Module နှင့်အသိဉာဏ်ထုတ်ကုန်များကရေးစပ်နေကြသည်။ မျိုးစုံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းများ၏အကျိုးကိုဆည်းပူးနေစဉ်နှစ်တွေကပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်အလေ့အကျင့်များနှင့်လျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးလယ်ကွင်းကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-L ကိုစီးရီးရေအထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-L ကိုစီးရီးရေအထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator ။
မေး: သင် AOX-L ကိုစီးရီးရေအထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator ဘို့စတော့ရှယ်ယာရှိပါသလား?
hot Tags:: ရေ အထောက်အထား linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်